Randomized pehurumende kuedza vanogona kutora siyana uye zvinogona kushandiswa kudzidza marudzi akawanda yokuzvibata. Asi, panguva yavo pokupedzisira, randomized dzinodzorwa kuedza kuva mana makuru zvinhu: muchiuto evakurukuri, randomization kurapwa, hurukuro kurapwa, uye nokuyerwa zvaitika. The digitaalinen zera haachinji chinokosha hunhu kwacho, asi zvinoita kuti zvive nyore logistically. Somuenzaniso, kare kuti kunge zvakaoma kuyera maitiro evanhu, asi kuti ikozvino kwava kuitika zhinji digitaalinen hurongwa. Vatsvakurudzi vanogona edza sei kusunga mikana mitsva iyi vachakwanisa kumhanya kuedza kuti akanga hazviiti kare.
Kuti izvi zvose yokuwedzera kongiri-zvose chii akagara chete uye chii zvachinja-ngationei Michael Restivo uye Arnout Van De Rijt raMwari (2012) . Vaongorori aida kunzwisisa migumisiro kurongwa kuda mibayiro pamusoro wedzero mipiro Wikipedia. Kunyanya, ivo kudzidza migumisiro barnstars, wekukunda kuti chero Wikipedian anogona kupa mamwe Wikipedian kubvuma basa rakaoma uye zvakafanira kushingaira. Restivo uye Van De Rijt akapa barnstars kuti 100 vakafanira Wikipedians. Zvadaro, Restivo uye Van De Rijt yakawana hunotevedzana vanowana 'mipiro Wikipedia pamusoro anotevera mazuva 90. Vakashamiswa zvikuru, vanhu vavakanga paakavapa barnstars nomuitiro kuti dze zvigadziriso vashoma pashure pakugamuchira mumwe. Nemamwe mashoko, barnstars zvaiita kuti kurambidza pane kukurudzira mupiro.
Sezvineiwo, Restivo uye Van De Rijt havana muchimhanya "perturb uye vachengete" chiedzwa; vakanga muchimhanya randomized inodzorwa chiedzwa. Saka, kuwedzera pakusarudza 100 pamusoro mipiro pova barnstar, naivowo vakanonga 100 pamusoro mari ani havana kupa barnstar. zana izvi aiva kudzora boka, uye ndiani vakanotora barnstar uye vasina akanga akatsunga randomly. Apo Restivo uye Van De Rijt akatarisa kudzora boka vakaona kuti akanga ane mawere ichidonhedzera mipiro zvakare. Pakupedzisira, apo vaongorori akaenzanisa vanhu vari muboka kurapwa (kureva, vakagamuchira barnstars) uye vanhu vari kudzora boka, vakaona kuti barnstar akaita vapepeti kupa anenge 60% yakawanda. Asi, kuwedzera uku nomupiro akanga achitora nzvimbo sesangano kunopindirana kuderera mumapoka maviri.
Sezvo kuongorora izvi zvinoenzanisira, kudzora boka iri kuedza vachishoropodza nenzira Apa gangaidzo. Kuti vadzi- kuyera mugumisiro barnstars, Restivo uye Van Der Rijt vaifanira kuchengeta vanhu kuti havana kugamuchira barnstars. Kakawanda vatsvakurudzi vasiri kujairana kuedza vanotadza kuonga incredible kukosha nokudzora boka. Kana Restivo uye Van De Rijt asina kudzora boka, vangadai vachera zvisizvo chaizvo. Mapoka Control zvakakosha zvikuru kuti CEO weimwe playing kambani huru akati kuti kune vatatu chete nzira kuti vashandi inogona kudzingwa basa kubva kambani yake: kuba, kushungurudzwa, uye vakamhanya kumwe kuedza pasina kuzvidzora boka (Schrage 2011) .
Restivo uye Van De Rijt kuti kudzidza zvinoratidza mana makuru zvokubikisa ane kuedza: muchiuto, randomization, kupindira, uye zvakaguma zvaitika. Pamwe chete, izvi zvinhu zvina kubvumira masayendisiti kufamba mberi correlations uyere causal mugumisiro nokurapwa. Zvakananga, randomization zvinoreva kuti paunenge enzanisa zvaitika kuti kurapwa uye masimba mapoka wasvikako anoona pamusoro causal mugumisiro kuti Kupindira kuti iine vechikamu. Nemamwe mashoko, aine randomized kudzorwa kuedza unogona kuva nechokwadi chokuti chero kusiyana zvaitika anokonzerwa kupindira uye kwete confounder, kutaura randichazviita chaiwo muna Technical Okuwedzera kushandisa mukana zvaitika asingaputsi.
Kuwedzera pakuva akanaka mufananidzo hurongwa ose kuedza, Restivo uye Van De Rijt kuti kudzidza rinoratidzawo kuti logistics pakati digitaalinen kuedza kunogona kuva akasiyana zvachose analoginen kuedza. In Restivo uye Van De Rijt kuti kuedza, zvakanga nyore kupa barnstar munhu munyika uye zvaiva nyore kuti chamber zvaizoguma-nhamba dze zvigadziriso-pamusoro ane rebei (nokuti Edit nhoroondo iri kwaita yakanyorwa Wikipedia). Kukwanisa ichi kuti anunure kurapwa uyere zvaitika pasina mutengo uri qualitatively kusiyana kuedza kare. Kunyange zvazvo kuedza ichi zvaisanganisira vanhu 200, zvinogona kunge uchibudisa 2,000 kana 20,000 vanhu. Chinhu chikuru kudzivisa vatsvakurudzi scaling kumusoro kuedza kwavo raishandiswa 100 haana mari, zvakanga magariro. Kureva, Restivo uye Van De Rijt aisada kupa barnstars kuti haukodzeri vapepeti uye havana kuda kuedza kwavo kuvhiringidza Wikipedia munharaunda (Restivo and Rijt 2012; Restivo and Rijt 2014) . Saka, kunyange zvazvo kuedza pamusoro Restivo uye Van De Rijt ari nyore kunzwisisa, zvinoratidza zvakajeka kuti zvimwe zvinhu pamusoro kuedza Magara zvakafanana uye vamwe vakachinja. Kunyanya, chinokosha pfungwa kwacho ndiko chete, asi logistics zvachinja. Zvadaro, kuti kupfigira zvakanyatsojeka mikana akasikwa kuchinja uku, Ndichaenda enzanisa kuedza kuti vatsvakurudzi kuita zvino kuti mhando kuedza kuti akaitwa kare.